North America Archives - Page 11 of 160 - Xinhua News Agency
ချီကာဂို၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) အမေရိကန်နိုင်ငံ အီလီနွိုက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန (IDPH) က ကိုဗင်-၁၉ ရောဂါ (COVID-19) ဖြစ်ပွားနေသော စာသင်ကျောင်း ၂၆ ကျောင်းရှိပြီဖြစ်ကာ ချီကာဂိုမြို့ပြဧရိယာရှိ ကျောင်းအမြောက်အများ ပါဝင်ကြောင်း Chicago Tribune က ဩဂုတ် ၃၁ ရက်၌...
COVID-19 ရောဂါကို နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ခြင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အာရှဆန့်ကျင်ရေး အမုန်းတရားများကို ပိုမိုဆိုးဝါးလာစေ
COVID-19 ရောဂါကို နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ခြင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အာရှဆန့်ကျင်ရေး အမုန်းတရားများကို ပိုမိုဆိုးဝါးလာစေသည်။ (Xinhua) ——————————————- (English Version) Politicizing COVID-19 has flamed up hate crimes against Asians in the U.S.
သူတစ်ပါးအား အပြစ်ပုံချခြင်းဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ
သူတစ်ပါးအား အပြစ်ပုံချခြင်းဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ (Xinhua) ………………………………………… Playing the blame game can’t fix America’s problems.
အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် ကဘူးလ်လေဆိပ်ကို တာလီဘန်ထိန်းချုပ်
ကဘူးလ် ၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်တွင် ခွင့်ပြုမိန့်(ပါမစ်) မလိုဘဲ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ရန် ဥပဒေက ခွင့်ပြုပေး
ဟူစတန် ၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ) အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်တွင် ခွင့်ပြုမိန့်(ပါမစ်)မရှိ၍ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မည်သည့်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက်မဆိုဖြစ်စေ အသက် ၂၁ နှစ် သို့မဟုတ် ၂၁ နှစ်အထက်ရှိသူ မည်သူမဆို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို ဩဂုတ် ၃၁ ရက် သန်းခေါင်ယံမှ စတင်ကာ ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရုပ်သိမ်းခြင်း ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပြော
ဝါရှင်တန်၊ ဩဂုတ် ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရုပ်သိမ်းခြင်း ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ကာ ယင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ နှစ် ၂၀ ကြာ အမေရိကန်နိုင်ငံဦးဆောင်သော တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝင်ရောက်ခြင်းမှာလည်း အဆုံးသတ်ပြီဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် ဗဟိုကွက်ကဲရေးဌာနက ဩဂုတ် ၃၀ ရက်က ကြေညာခဲ့သည်။ “အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှ ကျွန်တော်တို့...
စီအိုင်အေ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ကဘူးလ်မြို့တွင် တာလီဘန် ခေါင်းဆောင်နှင့် လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့
ဝါရှင်တန်၊ ဩဂုတ် ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ) အမေရိကန်နိုင်ငံ ဗဟိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ (CIA) ညွှန်ကြားရေးမှူး ဝီလီယံ ဘန်းစ် (William Burns) သည် တာလီဘန် ခေါင်းဆောင် အဗ္ဗဒူလ် ဂါနီ ဘရာဒါ (Abdul Ghani Baradar) နှင့် ကဘူးလ်မြို့၌ လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်...
မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့တွင် ရေနံတွင်းမီးလောင်မှုကြောင့် လူ ၅ ဦးသေဆုံးပြီး ၂ ဦးပျောက်ဆုံး
မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ ဩဂုတ် ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ) မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့ရှိ ရေနံတွင်းတစ်ခု မီးလောင်မှုတွင် အနည်းဆုံး အလုပ်သမား ၅ ဦးသေဆုံးပြီး အခြားသူ ၂ ဦး ပျောက်ဆုံးကာ ၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ရေနံတွင်းလည်ပတ်သည့် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံပိုင်း Petroleos Mexicanos (Pemex) က ဩဂုတ်...
အမေရိကန်နိုင်ငံ တင်နက်ဆီပြည်နယ်၌ ဆိုးရွားသောရေကြီးမှုကြောင့် သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၁၅ ဦးအထိ မြင့်တက်လာ
ဝါရှင်တန်၊ သြဂုတ် ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) အမေရိကန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း တင်နက်ဆီပြည်နယ်၊ Humphreys ကောင်တီ၌ သြဂုတ် ၂၁ ရက်တွင် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လူ ၃၀ခန့် ပျောက်ဆုံးနေပြီး သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၁၅ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက သြဂုတ် ၂၂ ရက်တွင်ပြောသည်။ ငါးဦးထက်မနည်း ပျောက်ဆုံးနေသူများမှာ...
Page 11 of 160« First‹ Previous789101112131415Next ›Last »